﻿ ३० वर्षको व्यवशायिक अनुभवलाई इटहरीका व्यवशायीको हितमा लगाउन चाहन्छु: गायित्री कट्वाल(भण्डारी)
बिहीबार ०५, असार २०७६
अहिले व्यवसायिहरुसंग भेटेर भोट माग्ने क्रम जारी छ । लगभग इटहरीको २० वटै वडाहरुमा पुग्यौं । व्यवसायिहरुसंग भेटेर उहाँहरुको समस्या बुझ्यौं । एकदम तिब्र रुपमा चुनावको तयारी भइरहको छ ।
तपाइको व्यवसायीक यात्राको बारेमा बताइदिनुस् न ।
मेरो व्यवसायीक यात्रा इटहरीमा सबैले उदाहरणको रुपमा लिनु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । मेरो पारिवारिक समस्याले गर्दा मेरो १५ वर्षकै उमेरमा विवाह भयो । त्यतिबेला मलाई धेरै जिम्मेबारी प्राप्त भएको थियो । परिवारलाई सम्हाल्दै एउटा कलिलो उमेरमा मैले २०४७ सालदेखि व्यवसाय सुरु गरेँ । त्यो समयमा घर परिवार हेरेर पनि व्यापार गर्दा मलाई धेरै समस्याहरु आएका थिए । समस्याहरु आए पनि म कहिल्यै आत्तीइनँ र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै आएँ ।
आज ३० वर्षसम्म पनि मैले यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेकी छु । इटहरीमा सानो कोठामा थोरै लगानीमा सुरु गरेको व्यवसाय आज जि फोर कलेक्सनमा परिणत गर्न सफल भएँ । २५ जनालाई रोजगार दिएकी छु ।
सफल व्यवसायी बन्न के गर्नु पर्दोरहेछ ?
एउटा सफल व्यवसायी बन्नको लागि सबैभन्दा पहिला इमानदार, लगनशील, मेहेनति हुनु आवश्यक छ । एउटा व्यवसायीले कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन । व्यवसाय सुरु गर्ने बित्तिकै त्यसको मुनाफा खोज्नु हुँदैन । म आज २९ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको छु । यतिका वर्षसम्म व्यवसाय गर्दा पनि सफल व्यवसायी बन्न आवश्यक कुराहरु सबै जानी सकेको छैन । जति गर्यो त्यति नलेज बढ्दै जाने हो । सफल व्यवसायी बन्न उपभोक्ता, कर्मचारी, साथीभाइहरुलाई खुसी बनाउन सक्नुपर्छ । ठुलो सोँच बनाएर मात्र सफल व्यवसायी बन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
इटहरीका व्यवसायीहरुको मुख्य समस्या के होलान त ?
इटहरीका व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको राजस्व कर, घर भाडा, अव्यवस्थीत बजार हो । इटहरीमा छरिएर रहेका अव्यवस्थित बजार छन् । पसल अगाडी लगाइने ठेलादेखि लिएर अव्यवस्थित पार्किङ, फुटपाथमा रहेका बजार जसले सटरमा कर तिरेर महंगो भाडा तथा चर्को व्याजदर तिरेर व्यापार गरिहनु भएको व्यवसायीहरुलाई आज विस्थापित गर्ने अवस्था छ ।
यस्तै इटहरीका व्यवसायीहरुलाई सुरक्षा छैन । अन्य सहरहरुका बजार राति ११ बजेसम्म पनि खुलिरहेको अवस्थामा इटहरीको बजार ६ बजे नै बन्द हुने गर्छ । त्यो सबै सुरक्षाको कमिले भएको हो । सम्बन्धीत निकायहरुले यस्तो विषयलाई निगरानि नगरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । इटहरीमा धेरै समस्याहरु छन् । यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागी सबैले मिलेर समाधानको उपाय खोज्न जरुरी छ ।
तपाइले चुनाव जितेर गएपछि व्यवसायीक विकासका लागी के गर्नु हुन्छ ?
पहिला म सानो व्यवसायी थिए । मलाई उद्योग वाणिज्य संघमा सुरुमा उमेद्वारी दिँदा व्यवसायीहरुले अत्याधिक मत दिएर जिताउनु भएको थियो । त्यो समयमा उद्योग वाणिज्य संघमा एकल महिला थिएँ ।
उद्योग वाणिज्य संघमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ । जुन पारीत भई विधान संशोधन पनि भयो । तर एउटा मात्र महिलालाई भोट दिँदै आउनु भएका इटहरीका व्यवसायीहरुले गएको चुनावमा अत्याधिक मत बदर भइ मैले हार स्विकार्नु पर्यो । बाहिर बसेर पनि मैले काम त गरिरहेँ । भोलिका दिनमा पनि गर्नेछु ।
महिलाहरु जो ओझेलमा पर्नु भएको छ, घर भित्रै रहेका महिलाहरुको आफ्ना व्यवसायीक कलालाई बाहिर निकालेर बजारसम्ममात्र हैन यो देशभरि फैलाउने मेरो लक्ष्य छ । त्यति मात्र नभएर इटहरीका सबै व्यापारीहरुलाई समेटेर काम गर्छु ।
यस्तै व्युटिसियन महिलाहरु इटहरीमा धेरै हुनुहुन्छ । सानो लगानी लगाएर सुरु गर्नु भएको छ । मैले जितेको खण्डमा हरेक वर्ष वहाँहरुको विकासकालागी तालिम दिने तथा नेतृत्व विकास गराउने काम गर्छु । जसले गर्दो वहाँहरुको व्यवसाय अझै फस्टाएर जानेछ । प्रदेश एकको मुख्य सहर इटहरीलाई सफा, सुन्दर तथा हरीयाली बनाउन र व्यापारी हव सिटी बनाउनका लागी मैले गर्नुपर्ने भुमिका र मेरो कर्तव्य म निभाउने छु ।
उद्योग वाणिज्य संघमा महिला उमेदवारमा उठेका हामी चारै जना महिला आ–आफ्नो ठाँउमा सक्षम छौँ । तर म के कारणले सक्षम छु भने यो चुनाव कुनै पार्टीको हैन, व्यवसायीको हो । मेरो व्यवसायमा ३० वर्षको अनुभव छ । धेरै दुख तथा संघर्ष गरेर यो स्थानमा आएको छु । व्यापारीलाई आई पर्ने समस्याहरु सबै मैले अनुभव गरेको छु ।
व्यापारीहरुका समस्यालाई समाधान गर्न म पहिला पनि लागी परेको थिएँ भने फेरी पनि लागी पर्नेछु । मेरो यो ३० वर्षको अनुभवलाई मैले आफुले जानेको क्षेत्रमा विताएको समयलाई सामाजीक काममा रुपान्तरण गर्न खोजेकी हुँ । व्यवसायीको हक हितको लागी लड्न सकेँ भने मलाई आत्मसन्तुष्टी मिल्ने छ ।
सम्पुर्ण व्यवसायीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो अमुल्य मत खेर नजाने र मत बदर नहुने हिसाबले दुई जना महिलालाई भोट हालौँ । राम्रो, योग्य, काम गर्न सक्ने तथा तपाइहरुलाई समस्या आउँदा समय दिन सक्ने उमेदवारलाई भोट दिनुस् ।